Khelkudsansar.com | थाइल्याण्डलाई नेपालले दियो २ सय ८२ रनको लक्ष्य
थाइल्याण्डलाई नेपालले दियो २ सय ८२ रनको लक्ष्य
Posted on: September 11, 2017 | views: 250
काठमाडौं,भदौ २६ । एसीसी यू-१९ इस्र्टन रिजन प्रतियोगितामा नेपालले अनिलकुमार शाहको उत्कृष्ट पारीसँगै थाइल्याण्डसामू २८२ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ ।टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले ५० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर २८१ रन बनायो ।
नेपालका लागि अनिलकुमारले उत्कृष्ट पारी खेले । उनी मात्र ९ रनले शतक बनाउन चुके । ७४ बलको सामना गरेका उनले ६ चौका र ५ छक्काको मलतमा ९१ रन बनाए । यस्तै प्रनित थापा मगरले अर्धशकत पुरा गरे । ६१ बलको सामना गरेका उनले तीन चौका र एक छक्कासहित ५० रन बनाए । नेपालका लागि सर्वाधिक रन बनाएका अनिल कुमार साह सतक बनाउन चुके। उनी ९१ रनमा आउट भए। ७४ बल खेलेका अनिलले ६ चौका र ५ छक्का हिर्काए। रोहित पौडेलले २८ रन बटुले। उनले ३० बलमा समान एक चौका र एक छक्का हिर्काए। कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीले ३२ बल खेलेर २२ रनमा आउट भए। यस्तै प्रनित थापामगरले अर्धशतकीय योगदान गरे। उनले ६१ बल खेलेर ५० रन बनाए। उनले ३ चौका र एक छक्का हिर्काए।
ओपनर मोहमद आसिफ शेखले २१ रन बनाए। ९ ‌ओभरको पहिलो बलमा आउट हुनुअघि २६ बल खेलेर २ चौका प्रहार गर्न सफल भए। अर्का ओपनर सन्दीप सुनारले ३२ रनको योगदान गरे। उनले ५७ बलमा ३ चौका प्रहार गरे। सन्दीपले अनिलसँग दोस्रो विकेटका लागि ५० रनको साझेदारी गरे। वन शर्राफ २२ र किशोर महतो २ रनमा अविजित रहे।
प्रतियोगिताको समूह ‘ए’ मा रहेको नेपालले सिंगापुर, भुटान र थाइल्यान्डविरुद्ध खेल्नेछ। समूह ‘बी’ मा मलेसिया, हङकङ, चीन र म्यानमार छन्। नेपालको बुधबार भुटानसँग र बिहीबार सिंगापुरसँग खेल हुनेछ। समूहबाट शीर्ष स्थान बनाउने दुई टोलीले यू–१९ एसिया कपमा छनोट हुन पाउनेछन्।
डिपिएल अक्सन:६ खेलाडीको सर्वाधिक मूल्य,कसको कति ?(सूचीसहित)
नेपालको युएई भ्रमणमा ६ खेल खेल्ने,कुन खेल कहिले ?(तालिका सहित)
शक्तिको बिदार्इ,अबको सक्रियता क्रिकेटको विकास र प्रशिक्षणमा